Barlamaank​a Puntland oo ansixiyey xeerka doorashooy​inka dowladaha hoose. – SBC
Barlamaank​a Puntland oo ansixiyey xeerka doorashooy​inka dowladaha hoose.
Posted by Webmaster on August 7, 2012 Comments
Meelmarinta xeerka doorashooyinka dowladaha hoose Puntland oo maalmihii la soo dhaafay meelmarintiisa ay u dhagtaagayeen shacabka Puntlandmaadama uu u horseedayo nidaamka xibiyada iyo dimuqraadiyada dhawaan la filayoin Puntland laga hirgalyo ayaa mantamudanayaasha barlamaanku meelmariyeen.
Kulankii manta oo ay soo xaadireen 56mudane uuna shirgudoominayey gumooyaha barlamaanka iyo ku xigeenadiisu waxaa ay dood xoogan kayeesheen xeerka doorashooyinka dowladaha hoose qodabadiisa ay ka mid ahaayeentirada degmooyinka ka qayb galaya dorashooyinka golaha deegaanka oomudanayaashu siwayn ugu kala firkir duwanayeen oo qaybtoodana doonaysay in kaqayb galaan doorashooyinka soo socda dhamaan 37degmo ee Puntland ka koobantahaykuwa kalena ay u xusul duubayeen in ay ka qayb galaan 21degmo ee xuduudahoodu xadaysantahay isla makaana 16kalena ay sugaaan inta laga xadaynayo xuduudahoodaisla markaana ay ka qayb galaan doorashada dambe.
Ka dib makii laysku mari waayey qodobada ku saabsan tirada degmooyinka ka qayb galaya doorashooyinka soo socda buuq xoogana uu ka dhashay golahadhexdiisa waxaa soo dhexgalay gudoomihabarlamaanka oo ku dadaalayey in u uu isoo dhaweeyo aragtiyaha kala duwan eegoloaha ka dhex taagan.
Waxaana uu talo ku soo jeediyey in cod loo qaado indoorashooyinka soo socda ay ka qayb galaan 21degmo eel eh xuduudaha cad islamarkaana ay 16degmo soo haray la xadeeyo inta aan la gaarin doorashada dambe.
Waxaana cod gacantaag ah ku ansixiyey 42mudane waxaana sidaasi ku meel maray xeerkadoorashoyinka dowladaha hoose oo ay ka qayb gali doonan 21degmo oo ka tirsan puntand.
Markii uu xirmay kalfadhigii 28ee golaha wakiilada Puntland
Waxaa warbaahinta uga waramay meelmarinta xeerkan caqabadihii soo wajahay golaha wakiilada intiiay ka doodayeen gudoomiyaha barlamaanka Puntland c.rishiid maxamed xirsi